Xiisada ka dhalatay LacagtaDaynta Sideetanka milyan ee Doolka ah iyo Tuhun laga qabo halkay ka timid | Biyoguurenews.com
Home Wararka Xiisada ka dhalatay LacagtaDaynta Sideetanka milyan ee Doolka ah iyo Tuhun...
Xiisada ka dhalatay LacagtaDaynta Sideetanka milyan ee Doolka ah iyo Tuhun laga qabo halkay ka timid
Guddoomiyaha guddida ilaalinta hantida iyo dabagalka musuqmaasuqa ee Golaha Wakiillada Xildhibaan Ibraahin Mahdi Buubaa ayaa markii u horaysay shalay shaaca ka qaaday in xukuumadda Madaxweyne Biixi la daala-dhacayso lacag dayn ah oo 80 Milyan oo doollar ah taas oo ay ku wareejisay xukuumaddii Axmed Siilaanyo hase ahaatee wasiirkii maaliyadda ee Siilaanyo Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa ku dooday in aanay jirin lacag dayn ah oo ay xukuumaddii hore ee Kulmiye ku wareejisay Xukuumadda Madaxweyne Biixi.
Xukuumadda Madaxweyne Biixi iyo Xukuumaddii hore ee Siilaanyo ayaa markii ay xilka la kala wareegayeen wada jir u sheegay in aanay jirin wax deyn ah oo ay la kala wareegeen, balse maalintii shalay ayay guddidu xog waraysi la yeelatay wasiirka maaliyadda Dr Sacad Cali Shire, islamarkaana ay sheegtay in wasiirku siiyay xogta xaddiga daynta ee ay kala wareegeen xukuumaddii hore.
“Wax-yaabo badan oo mad-madow ku jiray ayaanu isla iftiiminay islana garanay wasiirka iyo kooxdiisa la socda intaba. Waxa ka mid ah in Xukuumadda maanta joogta deyn dhan $80 Milyan oo dollar ay kala wareegtay Xukuumaddii hore oo la inoo sheegay siyaasiyan markii laga wada hadlaayey xil wareejintii in aan wax deyn ah oo lagaga tegay ama Xukuumaddii hore ka tagtay aanay jirin, deyntaana ay la ildaran tahay ama ay Xukuumadda culays badan ay ku hayso bixin-teedu.”Ayuu yidhi Xildhibaan Buuba oo wasiir Sacad barbar taagna wasiirka laftiisuna waxa uu sheegay in ay mar kasta jirto dayn dawladuhu isku wareejiyaan.
Dhanka kalene Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Dr Sacad Cali Shire ayaa sheegay isna in wasiirkii xilka uga horeeyey ee Maaliyadda uu ku wareejiyey deyntaa, isagoo tilmaamay in aanay wax cusub ahayn deyntu lagu leeyahay Xukuumadda KULMIYE . “Deynta Xukuumadda lagu leeyahay wax cusub maaha dowlad aan deyn gelina ma jirto, maalintii aan la wareegayey xilka waxay kamid ahayd deyntu wixii la igu wareejay ee xil wareejinta ka mid ahayd .” Ayuu yidhi Wasiirka Maaliyadu Dr Sacad Cali Shire
Haddaba Wasiirkii hore ee maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa telefishanka Horn Cable u sheegtay in aanay jirin dayn ay wareejiyeen, inkasta oo laga yaabo in waxyaabo yar oo hadhaayow ahi jirin karaan kuwaasna aanay dhawr malyan ba gaadhi karin.
Waxay sheegtay in daynta dawladdu tahay mid hantiileyaasha shacabka ah laga qaato oo u dhexeysa wasaaradda maaliyadda iyo bangiga taasna aanay jirin “Dayn waxa laga qaadan kara qof shacab ah, qofka shacabka ah ee milaayiinta laga qaadanayo ee jooga anigu kama tagin mana ogi, waxa dayn loo qaata marka wasaaradda maaliyaddu dayn codsato ee daynta qaadato ee xisaabiyuhu ogyahay ee dabeedna akoonka 11 lagu shubo dabeedna halka lagala baxayo,” Sidaas ayay tidhi Marwo Samsam.
“Lacagta ay dawladdu ka tagta waxa weeye lacag u dhexeysa maaliyadda iyo baanka waa wax yaryar oo afar milyan shan milyan aan dhaafin wax shicib leeyahay bishii December wixii ay shidaal ina siiyeen ama raashinka ciidanka haddii ay waxyaabaha wax ka soo baxaan aniga diyaar u ah in aan ka jawaabo, wuu jooga xisaabiyihii ila shaqaynayay, wuu jooga agaasimihii maamulka, lacagta dawladda dadku waxay moodayaan lacag meel iska taalla oo la qaadanayo akoown 11 foojar bay kaga baxda lacagtu laakiin, haddii qof shacab ah warqad iska sito oo yidhaa lacag baan dawladda ku leeyahay dee in la hubsado oo dadka la waydiiyo oo wasiirku maaha qofka shaqada maalinlaha ah haya ee dadkii hayay way fadhiyaan; agaasimihii wuu jooga, xisaabiyihii wuu jooga, baanka dadkii joogay way joogan marka waxaasi maba aha wax la isku waale waa la waraysan kara,” Sidaas ayay tidhi Samsam.
Samsam waxay sheegtay in ay la hadashay Dr Sacad islamarkaana uu u sheegay in aanay afkiisa ka soo bixin lacagta daynta ah laakiin, wasiir Sacad ma beenin arrintan markii xildhibaan Buubaa oo barbarkiisa taaggan sheegayay sidoo kalena arrintan saxaafadda kama beenin.
Maxay Tahay Daynta La Isku Tuurtuurayo?
Xukuumaddii Siilaanyo ayaa fagaareyaasha ka sheegi jirtay in ay xukuumaddii ka horaysay ee Daahir Rayaale ka dhaxashay lacag dayn ah iyo khasnad madhan laakiin, maxay tahay lacagta xaddigan leh ee xukuumaddaha Kulmiye isku tuurtuurayaan?
Sida ay sheegtay Samsam Cabdi Aadan waxay dawladdu lacag ka amaahata ganacsatada ama shakhsiyaad lacag haysta. Maxamuud Cabdi Jaamac guddoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA oo ka dareen celinayay lacagtan daynta ayaa ka sheekeeyay ganacsade uu ogaa in uu xukuumadda lacag ku leeyahay laakiin, xafladdii xil wareejinta ee Biixi iyo Siilaanyo aan wax dayn ahba la isku wareejin.
“Nin Ganacsade ah baan ku idhi maalintii xil wareejinta labada Madaxweyne wax Dayn ah lama wareejin adigu na waa adigii lahaa lacag badan baan ku leeyahee maxaa dhacay? Wuxuu iigu jawaabay xukuumaddaha sida aan Daymahayaga uga qaadano waanu naqaanaaye ha noo biqin!!!.
Maalintaas jawaabtaas kumaan qancin, wallow uu iiga sheekeeyey qiso ahayd Daymo ay ku lahaayeen UDUB sidii ay Maxamed Xaashi Cilmi oo wasiir ahaa wakhtigii Siilaanyo uga qaadeen.Kulmiye haddii ay isku xil qariyeen Dayntaas, waxa ka sii daran xil qarsiimooyinka kale ee laga galay Qarankan kala badh dadkiisii la leeyahay Macaluul bay qarka u saaran yihiin,” Sidaas ayuu yidhi guddoomiyaha SOLJA qoraal Facebook ku qoray.
Hay’adda Center For Policy analysis(CPA) oo fadhigeedu yahay Hargeysa ayaa bishii July ee sanadkii hore sheegtay in lacagtii doorashada kaga baxday xisbiyadu ay ku qiyaaseen 54 Milyan oo doollar laakiin, may sheegin sida ay xisbiyadu lacagtan u kala isticmaaleen. Dr Cabdiraxmaan Cirro guddoomiyaha xisbiga WADDANI oo bishii October taageerayaashiisa kula hadlayay London ayaa isaga oo tixraacaya warbixintan wuxuu sheegay in xisbigiisu lacag yar isticmaalay una arko in lacagtan badankeeda uu KULMIYE isticmaalay.
Dadka siyaasadda odorosa ayaa u arka in lacagta ay isku tuurtuurayaan maamulka madaxweyne Biixi iyo nidaamkii Md Axmed Siilaanyo ay tahay lacagtii xukuumaddii hore kaga bixisay ololaha doorashada Mr Biixi taas oo aanay labada dhinac si toos ah isugu saari karin farta laakiin, la isugu xil qariyay sidii ka dhacday xafladdii xilwareejinta oo dadku filayeen in daynta la sheegi doono laakiin, dhinacyadu bilaa dayn xilka ku kala tirsadeen.
Haddii ay jirtay lacagta xaddigaasi leeg ee daynta ah oo hadda culays ku haysa xukuumadda madaxweyne Biixi waxa la eegaya in ay xukuumaddu u sibir saarto sida ay ku timid haddii aanay ahayn mid ololaha lagu galay oo la xisaabiyay madaxweyne Biixi taas oo madaxweynaha ku adag in uu ka galgasho.
Previous articleJamaal Cali Xuseen, Tuugadu waa Labo Nooc, yaabay Sideetan Milyan ayaa La ……………
Next articleDaawo, Ramaax cali hayste oo Dobogalay Lacagta daynta ah ee la sheegay in xukuumada somaliland lagu leeyahay, eedaymana dusha uga tuuray xukuumada madaxawyne muuse biixi